ကလေးပန်းချီပြိုင်ပွဲ: သင့်ရဲ့ အခွင့်အရေးများကို ရေးဆွဲပုံဖော်ပြီး ဆုများကို ရယူလိုက်ပါ! - Service européen pour l’action extérieure
SEAE > Myanmar (Birmanie) > ကလေးပန်းချီပြိုင်ပွဲ: သင့်ရဲ့ အခွင့်အရေးများကို ရေးဆွဲပုံဖော်ပြီး ဆုများကို ရယူလိုက်ပါ!
ကလေးသူငယ်တိုင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိသင့်၊ ရရှိထိုက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကလေးတစ်ဦးဟာ ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသလို အားလပ်ချိန်မှာ ကစားခွင့်၊နားခွင့်လည်း ရှိပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂက အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအပြင် ကလေးတွေရရှိခံစားထိုက်တဲ့ အခြားသော အခွင့်အရေးများစွာကို ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကသဘောစာချုပ်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာတော့ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ်ဟာ အနှစ် ၃၀ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဂုဏ်ပြုပါဝင်ဆင်နွှဲမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကျင်းပမယ့် ကလေးပန်းချီပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲ လိုက်ပါ! မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂရုံးမှ အသက် ၂နှစ် နှင့် ၁၈နှစ်ကြား ကလေးများအား ပန်းချီများ ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆုပေါင်း ၃၀ကျော်ကို ရယူပါရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်သုံးခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး သင်၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါ!
၁။ Education is for everyone! ပညာရေးသည် လူတိုင်းအတွက်!
၂။ We deserve to have fun! ငါတို့ဟာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ထိုက်တန်တယ်!
၃။ Speak out! ထုတ်ပြောလိုက်ပါ!
ပန်းချီများအား နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်၊ ၂၀၁၉ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ပန်းချီများအား jpg သို့မဟုတ် pdf ဖိုင်ဖြင့် euinmyanmar4children@gmail.com
သို့ဖြစ်စေ ဖုန်း +၉၅-၉၈၈-၉၅၇-၀၈၅၇၏ WhatsApp သို့မဟုတ် Viber သို့ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
စာတိုက်မှပို့မည်ဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံး၊ ပြည်လမ်းနှင့်လှည်းတန်းလမ်းဆုံထောင့်၊ လှည်းတန်းစင်တာ၊ ၆လွှာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လိပ်မူပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဆုရရှိသူတွေကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၉တွင် ကျရောက်တယ့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေး သူငယ်များနေ့မှာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာhttps://www.facebook.com/EUinMyanmar/မှာ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ ပေးပို့ထားတဲ့ ပန်းချီများအားလုံးကို ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ အင်စတာဂရမ် https://www.instagram.com/euinmyanmar4children/ မှာလည်း ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးပို့ပါက (၁) ပန်းချီကားခေါင်းစဉ်၊ (၂) ပန်းချီဆရာ၏ အမည်၊ (၃) ပန်းချီဆရာ၏ အသက၊် (၄) ပန်းချီဆရာ၏ နေထိုင်ရာအရပ၊် (၅) ပန်းချီဆရာ၏ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ အမည်၊ (၆) ပန်းချီဆရာ၏ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် တို့အား ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ ပြိုင်ပွဲဝင်များကို အသက်အရွယ်အလိုက် အသက် ၂နှစ် မှ ၆နှစ်၊ ၆နှစ် မှ ၁၂နှစ်၊ ၁၂နှစ် မှ ၁၈နှစ် ဆိုပြီး အုပ်စု(၃)စုခွဲပြီး အသက်အုပ်စု တစ်ခုချင်းစီအတွက် အကောင်းဆုံးပန်းချီကား (၁၀)ဆု ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
၂။ ကလေးတစ်ဦးလျင် အများဆုံး ပန်းချီကားနှစ်ကားအထိ ပေးပို့နိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပန်းချီနည်း စနစ်ဖြင့် ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးအနေဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ပန်းချီကားများကို၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် အသုံးပြုကာ၊ ပန်းချီရေးဆွဲသူ၏ အမည်၊ အသက်နှင့် နေရပ်တို့ကို ဖော်ပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။